လူကောင်းသွားနေရင်တောင် ရောဂါရသွားမယ့် ရွှေပြည်သာက Q စင်တာ အခြေအနေ - Zet Star
လူကောင်းသွားနေရင်တောင် ရောဂါရသွားမယ့် ရွှေပြည်သာက Q စင်တာ အခြေအနေ
မြင်ရကြားရတာလည်း စိတ်မချမ်းသာဘူး…တော်ရုံတန်ရုံ ဒီလိုမတင်ချင်ဘူး တင်မှရမယ့် အခြေအနေမလို့ တင်လို့က်ရတာပါ.
ကျနော်တို့ပိုင်တဲ့ အဆောင် မှာ အခန်းတစ်ခန်းက အလုပ်သမားတစ်ယောက်က P ဖြစ်တော့ ရှိသမျှ အခန်းတိုင်း တစ်ဆောင်လုံး Q ဝင်ကြရတယ်. အဆောင်သူတွေအကုန်လည်း စိတ်ဓာတ်တွေကျပေါ့ … ကိုယ်တွေကလည်း အဆောင်ပိုင်ရှင်လည်း ဖြစ်တော့ ကိုယ့်ဘက်က ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ ဆေးဝါး အစားအသောက်အကုန် တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ..
တတ်နိုင်သလောက်လည်း အားပေးတယ် အဆင်ပြေမှာပါ အကုန် အားလုံး အသင့်ပြင်ထားတယ်ပေါ့ ရပ်ကွက်တာဝန်ရှိသူတွေကို လည်းသေချာမေးတယ် အဆင်ပြေနိုင်လားပေါ့ … အခုတော့Lockdown မှာ၂ ရက်ကြာပီး ဒီမနက်ပဲ အကုန် Q center ဝင်ကြရတယ် .. နေရတဲ့ အဆောက်ရဲ့ အခြေအနေကတော့ အောက်ကပုံတွေအတိုင်းပါပဲ
လူကောင်းတောင် ရောဂါရမယ့်အနေအထား… အများကြီး မျှော်လင့်ပီး တောင်းဆိုတာ မဟုတ်ဘူး အပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူး လက်ရှိ အမှတ် ၁ ရပ်ကွက် ရွှေပြည်သာ မြို့နယ် အေဘယ်ကလပ်စက်ရုံ မှာဖွင့်ထားတဲ့ Q စင်တာရဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်ပီး လူသားချင်း စာနာမှုနဲ့ပဲကြည့်ပါဦး
ငါဆိုရင်ရော အဲ့လိုနေနိုင်မလားလို့ တွေးပီး အနည်းဆုံး အိမ်သာ ရေစင် လောက်တော့ သုံးလို့ရမယ်​့အနေထားမှာ ရှိနေရမယ်လို့ ထင်တာပဲ.. လူ က တစ်ဆောင်လုံးဆိုတော့ အားလုံးပေါင်း ၃၀ နီးပါး.. အခုတော​့ Hotline ကိုဆက်ပီး အကူအညီတောင်းထားတယ်. အခုလိုတင်ရတာလည်း အကူအညီရနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ​့ အဆောင်ကကလေးတွေကိုယ်စားတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.
တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ အခက်အခဲကို နားလည်ပါတယ် ဒါပေမယ့် လူနေဖို့ သင့်တော်​၏ မသင့်တော်​၏ လေး အနည်းဆုံး တွေးပေးစေချင်ပါတယ်…
Myint Thin Naung
← နေပြည်တော်သို့ အိမ်စီးကား ယာဥ်ငယ်များ ဝင်ထွက်ခွင့် စတင်ပိတ်၊ မဖြစ်မနေ ဝင်ချင်ပါက Q ဝင်ရမည်
အရင်က A တန်းက လူတွေပဲ ဆရာဝန်တွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ စစ်ဗိုလ်ကြီးတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ခဲ့တာ… →